जलवायु परिवर्तनबाट महिला बढी प्रभावित ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि जलवायु परिवर्तनबाट महिला बढी प्रभावित !
on: ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:५७ र यो पनि
जलवायु परिवर्तनबाट महिला बढी प्रभावित !
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट विस्थापित हुनेमा ८० प्रतिशत महिला हुन्छन् । महिलाहरू खाद्यान्न र इन्धनको प्रमुख आपूर्तिकर्ता भएका कारण पनि बाढी र खडेरीजस्ता प्रकोपका समयमा उनीहरूको अवस्था थप दयनीय बन्ने अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट महिलाहरू अत्यधिक प्रभावित बन्ने देखेरै सन् २०१५ मा भएको जलवायु सम्झौतामा महिला सशक्तीकरणलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
प्रकोपका कारण नजीकका पानीका स्रोतहरू सुक्दै जान्छन् । टाढाटाढाबाट पानी खोजेर ल्याउनु महिलाकै जिम्मेवारी रहन्छ । त्यस्तै, सुख्खा मौसममा पुरुषहरू महिलालाई एक्लै घरमा छोडेर कामको खोजीमा शहरतिर लाग्छन् । यस्तोमा परिवार र समुदायको हेरचाह गर्ने जिम्मा पनि उनीहरूकै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलामात्र प्रभावित बन्दैनन् । विश्वमा गरीबीको रेखामुनि सबैभन्दा बाँच्ने पनि महिलाहरू नै बढी हुन्छन् र पुरुषको तुलनामा महिलाको सामाजिक आर्थिक क्षमता पनि कम हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोपले पूर्वाधार, जागीर र घरमा क्षति पु¥याउने हुँदा प्रकोपबाट बाहिरिन झन् कठिन हुन्छ ।
सन् २००५ मा अमेरिकामा आएको कटरिना नामक आँधीपछि आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा अफ्रिकी अमेरिकी महिला नै थिए । त्यस्तै, शहरमा रहेका आधाभन्दा बढी गरीब परिवार एकल महिलाको नेतृत्वमा चलेको पाइएको थियो । त्यतिमात्र नभई प्रकोपपछि जस्तोसुकै स्थानमा पनि बस्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका उच्च जोखीममा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । ती शिविरहरूमा महिलाका लागि आवश्यक सामान, जस्तै स्यानिटरी प्याडको अभाव हुने र यसले महिला हिंसाको सम्भावना पनि बढाउने बताइएको छ । प्रकोपले सबैलाई समान तरीकाले प्रभावित नपार्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यतिमात्र नभई जलवायुसम्बन्धी योजनामा निर्णय लिने कुरामा पनि महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, महिला सानो उमेरमा नै मारिने सम्भावना पनि बढी रहेका कारण उनीहरूको जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी) पनि पुरुषको तुलनामा धेरै नै घटेको बताइन्छ । एजेन्सी